Best Forex Forex Broka na-enye Akaụntụ Swap-Free Akaụntụ 2021
N'ihe metụtara Iwu Sharia (uche Chineke maka ihe a kpọrọ mmadụ, dị ka ọrụ ahụ si kwuo) - enweela arụmụka kemgbe ọtụtụ afọ gbasara ma ahia Forex ọ bụ ma ọ bụ na ọ bụghị iwu.
N'ezie, ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ maara na ịgba chaa chaa (Al-Maisir), mmanya (Khamr) na anụ ezi (ezì) niile bụ ihe haram (yabụ amachibidoro ya) dị ka ọrụ - ma ị maara na ahịa azụmaahịa ekwesịghị ịbụ?
Bọchị ndị a, ọtụtụ ndị ọkà mmụta dị iche iche n’echiche dị ntakịrị, na-eburu n'uche ndụ nke oge a na ihe nke ahụ pụtara maka ndị okwukwe Alakụba. Nke a gụnyere ka na-asọpụrụ Iwu Alakụba n'ụzọ zuru ezu, mana ikekwe ịkọwa akụkụ ya ntakịrị.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-eso ụzọ okpukperechi Alakụba na ị ka ga-achọ ịzụ ahịa azụmaahịa, ị ga-enwe obi ụtọ ịmara na ọ ga-ekwe omume ịmepe akaụntụ azụmaahịa halal.
N'ime ntuziaka a, anyị ga-akọwa ihe ndị na-ere ahịa azụmaahịa Alakụba bụ, usoro dị mkpa iji lelee anya mgbe ị na-ahọrọ ikpo okwu nke na-egbo mkpa gị, yana ndị na-eweta ya we chee na ị kwesịrị ịtụle na 2021.
Overzụta ihe karịrị 2,400 n'ebughị ụgwọ ụlọ ọrụ ọ bụla
Ginị bụ Akaụntụ Forex Broker?
Na nkenke, ihe omuma banyere onye na-ere ahia nke Alakụba iji nye ndị na-eso ụzọ Alakụba aka ka ha nwee ike ịzụ ahịa ego - ebe ha ga-anọgide na-ekwenye na nkwenkwe okpukpe ha.
Kedu otu nyiwe nke brokaji si eme ka nke a kwe omume? Dabere na Iwu Sharia, amachibidoro ịkwakọba akụnụba ego, yabụ na akaụntụ Islam anaghị enweta ma ọ bụ kwụọ ọmụrụ nwa ọ bụla.
Mgbe ụfọdụ a na-akpọ 'akaụntụ Halal Forex' ma ọ bụ 'akaụntụ na-enweghị ịgbanwee' - ihe ndekọ ndị a adịgo oge. Ọtụtụ ụlọ ọrụ brokerage na-enye ụdị akaụntụ a. Offọdụ n'ime ndị na-anaghị agbanwe agbanwe ka ga-agbanwe akaụntụ iji kwekọọ na mkpa okpukpe nke mmadụ. Ka anyị kọwaa obere ihe banyere nto ala Islam Forex ahịa.
Isi nke Forex Trading Halal
Ntọala nke akụkọ ihe mere eme nke Alakụba kwekọrọ na akaụntụ Forex. N'ezie, nke a bụ, ewezuga eziokwu ahụ na ndị na-ere ahịa azụmaahịa Alakụba ga-agbaso usoro iwu nke ego Islam.
Isi ihe dị mkpa nke ego alakụba bụ:
Kọwapụta / ịgba chaa chaa - 'maisir'
Nchaji ma ọ bụ ịkwụ ọmụrụ nwa - 'riba'
Egwu na ejighị n'aka - 'gharar'
Aka na aka - 'ahia ahia'
Dịka anyị kwurula, isi okwu nke ndị na-ere ahịa ndị Alakụba bụ ịnye akụkọ gbasara ego maka ndị chọrọ ịkwado okpukperechi ha. Uzo ahia ndi mba ọdịda anyanwụ n'echebara atumatu anọ a anya.
Ọ bụ ezie na ọkpụkpụ ndị gbapụrụ agbapụ nke azụmaahịa anaghị emegide Iwu Sharia, enwere ihe ndị ọzọ dịka ụgwọ ego abalị na wdg.
Trazụ ahịa Forex - Haram ma ọ bụ Halal?
N’iburu n’uche na ihe dịka 25% nke ụwa bụ ụmụazụ nke okpukperechi Alakụba, ọ bụghị ihe ijuanya na arụmụka ochie nke ma ahia azụmaahịa ma ọ bụ na ọ bụghị bụ nke na-aga n’ihu.
Ka anyị na-akọwapụta na ntuziaka a, a na-anabata akụkụ nke azụmaahịa azụmaahịa n'ụzọ zuru oke na Iwu Sharia - mana ihe nwere ike gbagwojuru anya maka onye okwukwe Alakụba na-anwa iji a ọdịnala Forex akaụntụ.
Enwere ihe ndị ga - eme ka ọ bụrụ ihe na - agaghị ekwe omume ịsọpụrụ okwukwe gị oge niile, dịka ịkwụ ụgwọ abalị na ịkwụ ụgwọ. Yabụ ị 100% ka mma karịa ịzụ ahịa na ndị na-ere ahịa azụmaahịa Alakụba. N'ụzọ dị otu a, enweghị ihe egwu dị na itinye aka na ụlọ ahịa haram ọ bụla.
Anyị achịkọtakwuola ntakịrị ihe ọmụma banyere ụkpụrụ ndị bụ isi nke iwu ego alakụba iji nyere aka kpochapụ alụlụ ahụ.
Maisir (Nkọwapụta / ịgba chaa chaa)
Mpaghara iwu Islam a na-achịkwa usoro iwu ndị a:
Bai bithaman ajil (ire ere na akwụghị ụgwọ ịkwụ ụgwọ)
Bai al inah (ire na mgbapụta)
Bai muajjjal (sale sale)
Murabaha (ego-tinyere ego)
Mudarabah (uru nkekọrịta)
Musawamah (ọnụahịa nke onye na-ere ahịa amaghị maka onye ahịa ahụ)
Bai salam (ịkwụ ụgwọ zuru ezu tupu oge eruo)
A maara nke ọma na amachibidoro ịgba chaa chaa maka ndị na-eso ụzọ okwukwe Alakụba, mana azụmaahịa Forex ọ bụkwa egwuregwu nke ohere?
Enweela arụmụka dị ukwuu n'okwu a, Ka emechara, nke bụ eziokwu bụ na ị na-azụ ma na-ere ego, ebumnuche bụ isi bụ ị nweta uru site na mgbanwe ọnụ ahịa na ahịa azụmaahịa.
Ugbu a chee na iji zụọ ahịa azụmaahịa, ndị ahịa kwesịrị ịmụ gbasara nyocha ọrụ aka, eserese ọnụahịa na data akụkọ ihe mere eme - ịghara ịkọ nwere atụmatụ dị.
Otu nwere ike na-arụ ụka na nke a pụtara na Forex trading bụ ihe ọ bụla ma a egwuregwu nke ohere, ya mere ọ bụghị ịgba chaa chaa. Inwe ihe ịga nke ọma n'ịzụ ahịa azụmaahịa chọrọ ụfọdụ nkà na nyocha - yabụ enweghị ike iwere ya dị ka haram.
Riba bu nnoo Arabic maka mmasi. Riba bụ haram dịka ọ nweghị onye na-eso ụzọ ụka Alakụba kwere ka ịnata ma ọ bụ binye ego. N'ihe banyere ụlọ akụ nke Alakụba, enweghị mmasị ọ bụla na akaụntụ ọ bụla, ma ọ bụ ego ma ọ bụ akaụntụ dị ugbu a - na otu ihe ahụ na mgbazinye ego.
Na mbọ iji merie iwu riba, ndị mmadụ na-eji 'Bai' al-Inah 'nke pụtara' ọrịre na ịzụrụ '. Nke a bụ usoro ego nke Alakụba nke na-enye ndị mmadụ okwukwe Alakụba ego.
Yak idọhọ ke owo anyam urua fo
Kama ịkwụ ụgwọ maka ihe ahụ ozugbo na ego, 'onye binyere gị ego' ga-enye gị ego (na ego akwụ ụgwọ)
‘Onye nbinye ego’ na-agbakwụnye uru
Onye ahụ wee zụta gị akụ ahụ ozugbo, na ego, yana ọnụahịa akwadoro
Nke a pụtara na onye nyere gị otuto nwere akụrụngwa ma nweta ego ịchọrọ
Ugbu a, ị ga-akwụrịrịrịrị ụgwọ nke akụ ahụ na nkeji obere, yana uru mmezi ekwere na mbụ
Enwere esemokwu ugboro ugboro na usoro a, na-adịkarị n'etiti isi isi abụọ nke Islam Finance - MENA (Middle East na North Africa), na Indonesia / Malaysia.
Dị ka ọ dị, mgbe ị na-emeghe akaụntụ na Forex na mbụ, ọ bụrụ na ị jide ọnọdụ mgbe nnọkọ ahịa ahụ mechiri, ndị na-ere ahịa ga-ewere ọrụ swap (ego ego ị ga-akwụ ụgwọ n'abalị).
Dịka onye na-ere ahia na-enye gị ego mbinye ego n'ụzọ na-enweghị isi n'ụdị itinye ego. - nke a pụtara na ọ na-aba uru. N'okwu a, a na-ewere ya dị ka ihe haram, ebe mmasị nwere akụkụ.
Isi ihe dị iche bụ - ndị na-ere ahịa Forex na-ewepụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ. N'ụzọ na-akpali mmasị, dị ka iwu ego Alakụba si kwuo, ndị na-eso okwukwe nwere ike wepụ ego mgbazinye na-enweghị ọmụrụ nwa iji nwee ego maka uru.
Ndị na-ere ahịa azụmaahịa Alakụba chọrọ ka ha nweta ego maka ọrụ ha na-enye, agbanyeghị, ha ga-eme nke a site na ịmebe ego ha n'ime gbasaa.
Gharar (Iwu nke Risk / ejighị n'aka na itinye ego)
Ikwu okwu banyere gharar - kor'an na - ekwu “Unu erikwala ihe unu n’etiti onwe unu maka ihe efu”. A kpọkwara Gharar n'akwụkwọ 'hadith' ebe ọ na-ekwu "Ree adighi ihe na esoghi gi". Ozi a doro anya.
N'okpuru koodu ego Islam a, amachibidoro azụmaahịa ọ bụla na-enweghị mgbagwoju anya ma ọ bụ ihe egwu dị n'okpuru Iwu Sharia. Dịka ọmụmaatụ, obere ire ere, nkwekọrịta nkwekọrịta, na ọdịnihu bụcha iwu n'ihi na a gaghị edozi ha n'otu azụmahịa ahụ.
Ebe ahia site na ndi ahia nke ndi ozo bu uzo di iche. N’ụzọ dị oke mkpa, ịkwesighi ichegbu onwe gị gbasara imebi iwu ndị a ka agbanwere akaụntụ gị ka ọ bụrụ onye na-asọpụrụ ha.
Aka na Aka ahia Islam
Na Islam, 'ahia' n'onwe ya ka enyere, ma oburu na eme ya 'aka'. N'ime afọ ndị gafere, nke a pụtara na ihu ihu na ihu. N'ezie ụbọchị ndị a ọtụtụ mmekọrịta azụmahịa na-arụ na oghere ịntanetị.
Scholarsfọdụ ndị ọkà mmụta na-ekwu na ahia kwesịrị ịbụ ihe ziri ezi n'ihi eziokwu ahụ ọ ka dị n'etiti ndị ọzọ (gị na onye na-ere ahịa). N'agbanyeghị nke ahụ, a ghaghị ịmecha ahịa ahịa n'otu oge ịzụ ahịa.
N'ihe banyere Forex, a na-egbu iwu ozugbo ozugbo, nke na-arụ ọrụ nke ọma maka ndị na-ere ahịa azụmaahịa Alakụba ma na-ekwesị ntụkwasị obi nye Iwu Islam.
Ogologo na nkenke ya bụ na ndị na-ere ahịa azụmaahịa Alakụba kwesịrị ịkwanyere ntọala niile nke ego Islam na Iwu Sharia ugwu - ebe ị ka na-enye gị ohere ịbanye na ahịa azụmaahịa ụwa. Site na azụmaahịa azụmaahịa azụmaahịa, ị nwere ike ịnọgidesi ike n'ụkpụrụ ụkpụrụ okpukpe gị ma sonye na ohere itinye ego.
Islamic Forex Broka: isslọrụ
N'adịghị ka akaụntụ azụmaahịa azụmaahịa ọdịnala, akụkọ banyere Forex forex na-abịa na mmasị efu. Nke a dị mkpa maka ya ka e were ya dị ka ihe iwu kwadoro. Dịka anyị kọwara na mbụ, agbanwere mmasị mgbe mmadụ hapụrụ ọnọdụ ha mepere n'abalị - ka ha na-akwụ ụgwọ ego.
Ikwughachi, mgbe ọ na-abịa na akaụntụ islam forex, ọ nweghị mmasị - yabụ enweghị ụgwọ mgbanwe a ga-ahụ. Iji mee ka ndị na-ere ahịa azụmaahịa nwee uru ụfọdụ, ị ga-akwụ ụgwọ ndị ọzọ dịka:
Gwọ ụgwọ ụgwọ
A na-ahụta ihe ndị a niile dị ka ihe ziri ezi na azụmaahịa azụmaahịa. Site na nke a, ị ga-etinye ụgwọ ndị dị n'elu na mgbasa. Dị ka ndị dị otú a, naanị 'ego' ị na-akwụ mgbe ị na-eji onye na-azụ ahịa azụmaahịa Alakụba tụkwasịrị obi bụ ọdịiche dị n'etiti nzụta na ire ere nke ụzọ ọhụụ ị họọrọ.
Forexzụ ahịa Forex Islamic: Otu esi amalite
Ka ọ dị ugbu a ịmara na ị nwere ike ịnọgidesi ike n'okwukwe gị nke Islam ma na-azụ ahịa Forex. Dị ka ndị dị otú a, anyị ga-agba ọsọ ngwa ngwa site na ụdị ahịa atọ dị iche iche ị ga-ahụ ịzụta na ire ego.
Ọ bụrụ na ị bụ ụbọchị trading, ị ga-emechi ọnọdụ azụmaahịa gị tupu ahịa emechie. Yabụ, tupu ụbọchị ahia agafee. Ya mere, aha, ahia ụbọchị na-rụrụ ke kiet ke otu ụbọchị.
Nke a pụtara na n'ịnọgide na-ekwesị ntụkwasị obi nye iwu Sharia, enweghị ego abalị (swap commission). Ihe dị mma banyere iji akaụntụ onye na-ere ahịa nke Alakụba, karịa nke ọkọlọtọ, bụ na ịkwesighi ichegbu onwe gị maka imechi azụmaahịa ahụ na ịbanye ụgwọ abalị.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, scalping chọrọ imeghe ọtụtụ obere ọnọdụ nke ga-emechi na naanị sekọnd, ma ọ bụ nkeji. N'ihi na ahia ahụ na-emechi na ngwa ngwa dị otú a - ịkwesighi ichegbu onwe gị gbasara mmasị, nke na-eme ka ọ zuo oke maka ndị na-eso ụzọ okwukwe Islam!
N'ezie, ọ bụrụ n'ịchọrọ, ị nwere ike ị na-azụ ahịa site na iji akaụntụ azụmaahịa ọkọlọtọ mgbe ị na-eji usoro nyocha. Agbanyeghị, ọ bụrụ n'ịchọrọ idobe ọnọdụ gị ogologo oge, wee zere mmasị, naanị nhọrọ maka gị bụ ịrapara na onye na-ebre ahịa azụmaahịa Alakụba.
Nanị ụzọ isi jiri a na-azụ ahịa atụmatụ bụ site na onye na-azụ ahịa azụmaahịa Alakụba gị. Nke a na-eji usoro nke ịhapụ ọnọdụ mepee maka ụbọchị ma ọ bụ ọtụtụ izu n'otu oge. Nke kachasị mkpa, ọ dị oke mkpa na ị jiri akaụntụ na-enweghị ego iji zere ọnụego ọmụrụ nwa ndị ahụ.
Ọ bụrụ na ị jụọla ọkọlọtọ, dịka ọmụmaatụ, ị ga-ahapụ uru ego ọ bụla. Site na iji akaụntụ Islam / swap-ị na-ewepụ ihe ize ndụ nke ịhapụ ọnọdụ na-emeghe n'abalị site na ndudue.
Otu esi acho ahia ahia nke Islam
Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ puku ndị na-ere ahịa azụmaahịa na ebe a, ọ bụghị ha niile ga-adabara ụmụazụ nke okwukwe Alakụba. O nwere ike isiri gị ike n'oge kachasị mma ịchọta ezigbo ụlọ ọrụ na-ere ahịa, yabụ mgbe ịchọrọ akaụntụ yana obere niche, ịchọta otu nwere ike isi ike karị.
Anyị ejikọgo ọnụ ndepụta nke ihe ị kwesịrị ịtụle mgbe ị na-achọ ndị kacha mma islam maka ị. Y’oburu n’inwe ike gbalie ike, anyi edeputakwala ndi mbu ahia nke ndi ala nke 2021 n’enwe akwukwo.
Ndi ahia ahia?
Agbanyeghị na nke a nwere ike iyi ihe doro anya, ọ ga-eju gị anya na ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-efe n'okpuru radar. Platformsdị nyiwe ndị ahụ na-enye ndị ahịa ọrụ ịzụ ahịa na-enweghị usoro nchịkwa ọ bụla na-enyocha ya.
Nke mbu, anyi agaghi agwa gi onye ahia ahia nke ndi Islam nke n’enweghi ikike site n’aka ndi isi ochichi. Nke abuo, ọ dịkwa ezigbo mkpa ka ị na-eduzi nyocha nke gị mgbe ị na-achọ onye na-ere ahịa.
Ihe izizi na listi gị kwesịrị ịbụ ịgba mbọ hụ na ikpo okwu gosipụtara ikikere ziri ezi. Ọ bụrụ n ’ịnọ na UK, dịka ọmụmaatụ, nke a ga-esi na FCA (Financial Conduct Authority).
Ọ bụrụ na ejighị n'aka, ka anyị kwuo na weebụsaịtị gosipụtara nọmba ikike FCA. Nwere ike ịgafe na ọkwa gọọmentị FCA mgbe niile wee mee ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dị mfe iji kwado ya.
FCA nwere iwu na ụkpụrụ na-eme ka ego gị dị na akaụntụ dị iche na ụlọ ahịa na-ere ahịa, ma ọ bụrụ na mpụ ego ma ọ bụ enweghị ego. Nke a bụkwa ihe gbasara ndị ọrụ nchịkwa ndị ọzọ a tụkwasịrị obi - dịka ASIC (Australia), CYSEC (Cyprus), na MAS (Singapore).
Ego na withdrawals
Ihe ọzọ ị na-ekpebi maka gị mgbe ị na-achọ onye na-ere ahịa azụmaahịa Alakụba bụ ihe nkwụnye ego na nhọrọ iwepụ dịịrị gị. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-ere ahịa ego nke Alakụba ga-ahapụ gị ka itinye nkwụnye ego site na ụlọ akụ gị site na mbụ (nke a na-akpọ nnyefe waya).
Nyefe ụlọ akụ bụ usoro ịkwụ ụgwọ dị mma nke ọtụtụ mmadụ maara, agbanyeghị, ọ bara uru na-arịba ama na nke a nwere ike igbu oge ịmalite azụmaahịa gị site na ụbọchị ole na ole n'ọnọdụ ụfọdụ.
Maka nke ahụ, ọ ga - adị mma ka ị họrọ ebe ikpo okwu na - anabata usoro ịkwụ ụgwọ dị iche iche dịka kaadị akwụmụgwọ / Debit na e-wallets dị ka PayPal na Neteller - dịka nkwụnye ego ndị a bụ ozugbo.
Ddọrọ ndị mmadụ n’agha nwere ike iwe ihe dị ka ụbọchị abụọ ka hazie, nwere ike ibute ego maka KYC (Mara Onye Ahịa Gị) yana nke ọzọ bụ maka usoro ịkwụ ụgwọ gị.
Otu ego dị mkpa ị ga-atụle na ikpo okwu nke onye na-ere ahịa bụ mgbasa. Ọ bụrụ na ị maghị ihe nke ahụ bụ, ọ bụ nnoo ọdịiche dị n'etiti ọnụahịa izu na ire ere nke ụzọ azụmaahịa ị na-azụ. A na-atụle mgbasa a mgbe niile na 'pipsma nwee ike metụta uru gị niile.
Iji maa atụ, ka anyị kwuo mgbasa maka GBP / USD bụ pips 3. Iji mebie ọbụna ị ga - eme ma ọ dịkarịa ala 3 pips na uru.
Nke a bụ otu ihe atụ banyere etu mgbasa si na ahịa ahụ ga-adị:
Dị ka anyị kwuru, ị na-azụ ahịa GBP / USD site na onye na-azụ ahịa azụmaahịa Alakụba gị
Ọnụ 'Buy' bụ 1.1200
Ọnụ 'ree' bụ 1.1203
Dị ka ị pụrụ ịhụ na ikpeazụ ọnụọgụ na-egosi ndị kasị nta unit na Forex ụzọ ọnụahịa ga-akpali
N'okwu a, mgbasa GBP / USD bụ 3 pips
Dị iche iche nke Forex ụzọ abụọ
Ọ bụrụ na ịchọrọ ilekwasị anya na otu ma ọ bụ ego abụọ, ị nwere ike ị gaghị eche na ịchọrọ ọnụọgụ dị elu nke ụzọ abụọ ịhọrọ. Nke a bá »tried a nwara na-anwale tactic na Forex ohere, dá» ‹ka á» ‹na-enwe ike itinye ndá» ‹nnyocha oge ole na ole.
Ọ dị mma oge ụfọdụ ịme nke ọma otu ma ọ bụ abụọ karịa ịbụ “Jack of all trades and master of none”. Agbanyeghị, oge ga-abịa mgbe ị ga-abịa do chọrọ ịgbasa pọtụfoliyo gị, ma mgbe oge ahụ ruru, ọ ka mma ịnweta nnweta nke FX abụọ.
Ikwesiri, ị kwesiri ịchọ ndị na-ere ahịa azụmaahịa Alakụba na-enye ọtụtụ 'obere,' majors 'na' exotics '. Ga-enwe ike ịchọta ozi niile a na weebụsaịtị onye na-ere ahịa yana ị kwesịrị ịlele usoro niile dị na ndepụta a tupu ịdebanye aha.
Ihe ngosi nka na uzu ahia
Ihe ọzọ ị ga - ele anya mgbe ị na - achọ imepe akaụntụ Forex nke bụ ngwa ahịa na ngwa agụmakwụkwọ dị.
Iji nye gị echiche nke ihe ị ga-ele anya maka anyị depụtara ụfọdụ akara ngosi ọrụ bara uru ndị ahịa azụmaahịa na-eji.
Forex Trading abụghị ihe dị mfe. O gwụla ma ị na-eji sistemụ arụmọrụ akpaghị aka ọ chọrọ nyocha, ọgụgụ eserese na idobe akụkọ ụwa. Nke a na-ewetara anyị omume ọma na ngwaọrụ azụmaahịa.
Ndị na-ere ahịa azụmaahịa Alakụba niile dị iche iche wee nwee ọnụọgụ dị iche na ọtụtụ akara ngosi na ngwa arụpụtara na saịtị ahụ. Nwekwara ike ịnweta akara ngosi, eserese na ngwaọrụ site na MetaTrader4, nke bụ usoro azụmaahịa nke ụfọdụ ndị na-azụ ahịa azụmaahịa Alakụba na-akwado.
Fọdụ n'ime ngwa ahịa azụmaahịa kachasị ewu ewu nke ndị ahịa azụmaahịa taa bụ ndị a:
MetaTrader4 ahia ikpo okwu
Akụrụngwa nyocha dị ka kalenda akụkọ akụ na ụba
Akụkọ akụkọ ego dị ka Bloomberg na Reuters
Ngwunye ihe ngwugwu ihe
Ngwaọrụ mmekọrịta ego
Ihe ntụgharị oge mpaghara Forex
Broker gbasara ngwa ọrụ
Ihe mgbako Forex volatility
Aryzụ ahịa / akwụkwọ akụkọ
Ezigbo ọrụ ndị ahịa dị oke mkpa. Goodzọ dị mma iji nwetakwuo nghọta banyere arụmọrụ nke ndị otu na-akwado ndị ahịa bụ ịgụ ụfọdụ nyocha ndị ahịa. Ọ bụrụ na ọrụ ahụ adịghị mma, ndị mmadụ ga-ekwu maka ya.
Lelee maka nkwado ndị ahịa 24/7. Ka emechara, Forex bụ a 24/7 ahịa. Mkparịta ụka ndụ na-abụkarị nhọrọ kachasị ewu ewu maka ndị ahịa n'ihi na ọ bụ ozugbo. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịtụ anya ịhụ adreesị ozi-e na n'ọnọdụ ụfọdụ nọmba ekwentị.
Y’oburu na onye ahia ahia gi nke ndi Islam choro inwe ezi ndu na mgbasa ozi o gha abacha uru maka idobe ya na ikori ndi ahia ndi ozo.
Kedu ka m ga-esi banye na onye na-azụ ahịa Forex nke Islam?
Ka ọ dị ugbu a, anyị ekpuchila ihe niile enwere ịma maka ndị na-ere ahịa Forex na ihe metric dị mkpa ma a bịa n'ịhọrọ otu. Ọ bụrụ n’inwebeghị onye na-ere ahịa dabara adaba n’onwe gị, anyị depụtara ụfọdụ ndị kacha mma gaa n’ihu peeji a ka ị tụlee.
Ọ bụrụ na ị dị njikere ibido, mgbe ahụ anyị etinyela usoro ntụpụ ụkwụ site na otu esi edebanye aha.
1kwụ na XNUMXkwụ XNUMX - Mepee Akaụntụ Islam
Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịga na ntanetị ebe ị họọrọ ịbanye. Usoro ahụ dị ihe dịka ebe ọ bụla ị gara, dị ka saịtị ahụ ga-ajụ maka aha gị, adreesị, email na paswọọdụ pụrụ iche.
Ọzọ, ị ga-aza azịza ole na ole gbasara ọnọdụ ego gị dịka ụgwọ ọnwa na ọnọdụ ọrụ gị. Ihe kpatara ndị ahịa na-ajụ maka ọnọdụ ego gị bụ ka ha na-enye ngwaahịa ndị kwesịrị ekwesị.
Kwụ na 2kwụ XNUMX - Tinye Trading History
Ohere inweta bụ ka a ga-ajụ gị ajụjụ dịgasị iche iche gbasara akụkọ azụmahịa gị. Forex abụghị maka ndị obi na-adịghị ike, n'ihi ya, ozi a ga-enyere ndị na-ere ahịa aka ịghọta ogo ahụmịhe gị, azụmaahịa ndị ị sonyeere n'oge gara aga, yana ụdị itinye ego ị na-elekwasị anya.
Kwụ na 3kwụ XNUMX - Mara Ahịa gị
N'ihi KYC nke anyị kwurula banyere ya na mbụ, ịnwere ike itinye ego na akaụntụ gị mgbe ị nyochachara njirimara gị. Nke a na-ekwukarị nke onye na-ere ahịa mgbe ọ na-eziga otu akwụkwọ ikike ngafe gị ma ọ bụ ikike ịnya ụgbọ ala.
Dị ka ihe akpachapụ anya, ọtụtụ agbanwe ga-achọ a oyiri nke a na-adịbeghị anya na ịba uru ụgwọ ma ọ bụ akụ na nkwupụta na aha gị na adres na ya.
Rịba ama: eToro - nke bụ onye na-ere ahịa alakụba ama ama ama amaala ama ama, na-enye gị ohere itinye ego ruru $ 2,250 na-enweghị ebugote ID ọ bụla. Ikwesiri ime nke a tupu ịmalite iwepu ego.
Nzọụkwụ 4 - Debe Akaụntụ Alakụba Forex gị
Ozugbo i nyefere akwụkwọ KYC gị, ị nwere ike ịga n'ihu ma tinye ego. Dịka anyị metụrụ aka, usoro ịkwụ ụgwọ dị iche, yabụ na-enyocha saịtị ahụ ka ị hụ ihe ga-adị gị.
Buru n'uche na inyefe ụlọ akụ nwere ike were ụbọchị iji kpochapụ, ebe ụzọ ndị ọzọ bụ ozugbo.
Kwụ na 5kwụ XNUMX - Amalite ahia Forex
Ugbu a ị gabigala usoro 1 ruo 4, gosipụtara na ị bụ onye ị na-ekwu na ị bụ, ma kwụọ ụgwọ akaụntụ gị - ị nwere ike ịmalite azụmaahịa Forex.
Ọ bụrụ na ị bụtụ onye mbido na azụmaahịa azụmaahịa, ị nwere ike ibido na akaụntụ ngosi ma ọ bụ jiri obere azụmaahịa jiri Alakụba zụọ ahịa micro akaụntụ. Ọbụna naanị mgbe ị hụrụ ụkwụ gị na Forex ohere.
Best 5 Islamic Forex Broka nke 2021
1. eToro - Igosiputa Ngwa ahia nke oma
eToro guzosiri ike nke ọma n'etiti ndị na-azụ ahịa ahịa ma na-ewu ewu na ndị na-etinye ego na newbie n'ihi usoro ntinye aka dị mfe na njirimara azụmaahịa dị mfe. Nwere ike banye na-erughị 5 nkeji iji a dịgasị iche iche nke ịkwụ ụgwọ ụzọ dị ka akụ nyefe, n'aka / debit kaadị na e-obere akpa. N'ihe banyere akụkọ ndị Alakụba, ị nwere ike ịmalite na eToro maka $ 1,000.
N'ịnọgide na iwu Sharia, eToro na-eme ahịa ozugbo n'egbughị oge, a na-ezigara onye zụrụ ya na onye na-ere ya ego ahụ, akwụ ụgwọ ya akwụshịkwa. Ebe a na-ere ahịa na broker na-enye mmasị na-enweghị atụ. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ọnọdụ gị eme meghee oge ahia nke ahia gara aga - enweghi ego a choro.
Ọbụghị naanị nke ahụ, mana eToro islam Account na-abịa site na ụgwọ njikwa efu. Ikpo okwu kama na-akpata ego site na mgbasa ya. Dịka onye ọrụ akaụntụ Islam, a ga-enye gị mpempe ego na-enweghị ọmụrụ nwa. eToro zuru oke nke ọma ma jide ikikere site na FCA, yabụ ịmara na echedoro ego gị
Ọ dị mfe ịmeghe akaụntụ
Enweghị ụgwọ ahia
Enweghị ngwá ọrụ ahia
Akaụntụ US Dollar naanị
$ 1,000 nkwụnye ego kacha nta maka akụkọ ndị Alakụba
Gaa Leta eToro Ugbu a
3. Capital.com - Ntanetị Kọmịshọn na Mgbasa gbasara Ọla kọpa
Capital.com na-enye gị ohere ịzụ ahịa ọla kọpa site na ngwaahịa CFDs. Ma ọ bụ, ị nwere ike ịzụ ahịa ngwaahịa CFDs nke ụlọ ọrụ ndị na-egwu ọla kọpa dị ka Southern Copper Corp. Ndị FCA na CySEC kwadoro ya, ndị na-ere ahịa ugbu a nwere ndị ahịa 700,000.
A na-ahụ aha ọma oge na nka nke Capital.com site na nnukwu akụrụngwa ya maka ndị ahịa ọhụụ. Nke a gụnyere akaụntụ ngosi CFD, usoro azụmaahịa na vidiyo nkuzi.
Capital.com bụ otu n'ime ndị na-ere ahịa ole na ole ga-akwụ gị ụgwọ ọrụ efu maka azụmaahịa ọla kọpa. Ha na-ekpuchikwa ọnụ ahịa nke nkwụnye ego gị na nwepu ego.
Ga-akwụ ụgwọ naanị mgbasa, nke bụkwa asọmpi dị elu na ikpo okwu a. Nkwụnye ego pere mpe bụ dollar 20, pound 20, ma ọ bụ euro 20, ma ọ bụ ego ọ bụla masịrị gị ịkwụ.
Ahịa n'efu na-ere ahịa n'efu
4. AvaTrade - MT4 / 5 Trading na-akwado Sharia
AvaTrade bụ onye ọzọ na-ere ahịa aha ọma na ndepụta anyị ma na-emezigharị ihe ndekọ ederede nke Alakụba iji daba onye ahịa ọ bụla. N'ịbụ onye njide akaụntụ Islam, ị nwere ike ịtụ anya ebubo ebubo efu (ụgwọ abalị) ma ọ bụ swaps kwa ụbọchị. Kama nke ahụ, a ga-ebo gị ụgwọ ego maka azụmaahịa gị. Nke a pụtara na ị ka ga-akwụdosi ike n ’iwu gbasara ego nke Alakụba.
Ngwurugwu a na-akwado MetaTrader4 na Metatrader5 ka i wee nwee ike ịzụ ahịa (ọ bụrụhaala na ha bụ halal), CFDs na ego abụọ na nghọta zuru oke.
Ikpo okwu a ji nganga kwuo na a gaghị enwe ụgwọ ọrụ zoro ezo ma ọ bụ ebubo ịgbasa agbagha nke ịmaghị. Ndị mmadụ n'okwukwe ndị Alakụba nwekwara ike ịnweta ọlaọcha halal na ọla edo nke Islam. Anabataghị azụmahịa Crypto na akaụntụ Islam a, yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụ ahịa cryptocurrencies ị ga-eji akaụntụ ọkọlọtọ.
N'ihe banyere Forex, gbalịa, YR,, RUB, ZAR, na MXN abụọ abụghị ndị Akaụntụ Islam. Ndị ọzọ niile nwere mmasị na-enweghị mmasị / na-enweghị ọrụ mana ị ga-atụ anya mgbasawanye mgbasa - Afterall, ndị na-ere ahịa azụmaahịa Alakụba ka ga-enweta ego.
Brokelọ ọrụ brokerage a na-asọpụrụ iwu ego Islam niile ma na-eme ahịa ozugbo dị ka ndị a. Ndị ahịa azụmaahịa Alakụba nwere ikike inweta ohere na-enweghị njedebe na nyiwe niile n'efu (dị ka android, iOS na WebTrader),
Otutu ego na-ere ahia
Mfe imeghe akaụntụ Islam
Gaa Leta AvaTrade Ugbu a
5. EuropeFX - Commodity Trading Site Na Nnukwu Mmụta Ihe
EuropeFX nke CySEC nyere ikikere iji nye ọrụ ahia ọla kọpa. Nwekwara ike ịzụ ahịa ndị ọzọ, Forex, ebuka na ndị ọzọ. Gwọ ebe a bụ asọmpi - ọkachasị ma a bịa n'ahịa ahịa ọla kọpa.
Ya n'elu ikpo okwu EuroTrader 2.5 mmemmem ahia site na desktọọpụ na mobile nsụgharị nke software. Enwekwara nkwado maka MetaTrader4, nke bụ ihe mgbakwunye maka ndị ahịa azụmaahịa n'etiti gị.
EuropeFX pụtara site na ndị na-ere ahịa ndị ọzọ na ndepụta a yana usoro ọkwa nke akaụntụ onye ọrụ. Nwere ike imeghe a ọkọlọtọ na akaụntụ na a kacha nta ego nke € 200.
Mana iji nweta njirimara ndị adịchaghị, ị nwere ike ịtụle ịhọrọ ụdị akaụntụ ọzọ - nke sitere na opekempe nke € 1,000 ruo € 50,000. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta akara ngosi, ọkwa ma ọ bụ webinars, ọ bara uru ịtụle otu n'ime akaụntụ ndị nwere ego dị elu
N'ime akwụkwọ ntuziaka a, anyị ekpuchila ihe niile gbasara ịma gbasara ndị na-ere ahịa azụmaahịa Alakụba, yana usoro metrik iji lelee anya mgbe ịchọta ihe kwesịrị ekwesị maka mbọ ahịa gị.
Dịka anyị siri kwuo, ọ dị mkpa icheta na ọ bụghị nyiwe niile nke ndị na-ere ahịa ga-akpọsa akụkọ Islam dịka, dị ka a na-eji ha mgbe ụfọdụ dị ka akaụntụ 'swap-free' ma ọ bụ 'halal'. Na nkenke, nke a pụtara na a na-agbaghara ụgwọ niile n'ihe gbasara iwu ego nke Alakụba.
Dika anyi kpuchie, site na iji ndi oru ahia nke ndi Islam nke edoziri nke oma, imara na ego ahia gi di iche na nke ndi ozo, n'etiti ndi ozo ndi ozo. All agbanwe na-atụ aro site anyị na-n'ụzọ zuru ezu na-achịkwa gị nchekwa.
Kedu ihe bụ Forex Forex Broker?
Onye na-ere ahịa azụmaahịa Alakụba bụ azụmaahịa Forex nke na-enye azụmaahịa na-enweghị mgbanwe iji kwe ka ndị ahịa nwee ntụkwasị obi n'okwukwe ha nke Islam, nke gbochiri ụgwọ ọmụrụ nwa
Kedụ ka m ga - esi mepee akaụntụ na Islamic Forex broker?
N'ikwu okwu n'ozuzu, ozugbo ịchọtara onye na-ere ahịa azụmaahịa ịchọrọ, ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị ọrụ ndị ahịa wee jụọ ha ka ha gbanwee akaụntụ ọkọlọtọ iji kwado mkpa gị
Kedụ ka m ga - esi tinye ego na Akaụntụ Islam ọhụrụ m?
Nwere ike itinye ego na akaụntụ islam gị nke Forex dị mfe. N'ọtụtụ nyiwe ọ bụ naanị banyere ịbanye na ịhọrọ usoro ịkwụ ụgwọ iji tinye ego.
Ego abughi ego n'abali?
Ee, ọ bụ, yabụ na akụkọ gbasara islam, a na-akwụ ụgwọ a.
Ọ bụrụ na ndị na-ere ahịa azụmaahịa Alakụba anaghị akwụ ụgwọ ọmụrụ nwa, kedu ka ha si enweta ego?
Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-ere ahịa oge na-akpata ego site na mgbasa - nke bụ ọdịiche dị n'etiti ịzụta na ire ọnụ ahịa nke ngwa ahịa ahụ.
M ga-ejedebe na ihe FX abụọ m nwere ike ahia na islam Account?
N'ọtụtụ oge, enwere ike ire ahịa ego niile n'ime iwu Sharia, n'ihi eziokwu ahụ ka edepụtara akụkọ Alakụba maka ndị na-eso ụzọ Alakụba. Agbanyeghị, ndị na-ere ahịa dị iche iche nwere iwu dị iche iche, nke pụtara na enwere ike ịmachi ụfọdụ ụzọ abụọ.
Kedu ihe bụ akaụntụ enweghị ego ịgbanye?
A na-akpọ akaụntụ Islam oge ụfọdụ dị ka akaụntụ na-enweghị ego gbanwere. Na nkenke, nke a na-enye gị ohere ịmeghe ọnọdụ n'abali na-enweghị eburu ego ọmụrụ nwa.